Nhau - Maitiro ekusarudza emukati freestandingr hangers?
Ungasarudza sei indoor freestandingr hangers?
Kune dzimba diki-diki, kuisa kusimudza racks hakungodhura chete, asiwo kunotora yakawanda yemukati nzvimbo.
Nzvimbo yeimba diki-diki idiki, uye kuisirwa kwekusimudza yekuomesa rack kunogona kutora nzvimbo yebalcony, inova sarudzo isina hupfumi.
Saka, kana iwe uchida kuomesa zvipfeko muimba duku, tinokurudzira kuti munhu wose asarudze indoor freestandingr hangers.Iyi hanger inogona kupetwa uye inogona kuiswa kure kana isiri kushandiswa.
Zvadaro tichadzidza zvakawanda nezve indoor freestandingr hanger.
Nzira yekusarudza jira remukati remukati rinoenderana nekugadzikana kwemaitiro.Kunyangwe iyo hanger yepasi yakagadzikana chinhu chakakosha chekutonga kana hanger yakanaka kana kwete.Kana chimiro chacho chisingavimbiki, hanger inogona kuparara uye hupenyu hwebasa hahuzove hurefu.Kuzunungusa neruoko rwako paunenge uchitenga kuti uone kana kugadzikana kuri kuenderana, uye sarudza firmer floor hanger.
Tarisa pakukura.Ukuru hwehanger hunosarudza kushanda.Tinofanira kufunga nezvehurefu uye huwandu hwembatya kumba kuti tive nechokwadi chekuti kureba nehupamhi hwehanger hwakakodzera.
Tichitarisa zvinhu, zvipfeko zvezvipfeko pamusika zvakagadzirwa nezvinhu zvakasiyana-siyana, zvakadai sehuni yakasimba, simbi, simbi isina tsvina, nezvimwewo, uye unofanira kusarudza zvinhu zvakasimba uye zvakasimba.
Zvinhu zvepasi hanger ndiyo yedu yekutanga chiyero kana tichitenga.Maturu epasi ekunyepa uye akaderera, nekuda kwekusagadzikana kwawo, anokonzeresa deformation, ngura, uye kusakwanisa kubereka nekuda kwekusagadzikana kwawo, uye hupenyu hwavo hwesevhisi hwakapfupikiswa zvakanyanya.Zvirembera zvepasi zvemhando yepamusoro zvinogadzirwa nesimbi yemhando yepamusoro, iine magadzirirwo akasimba, kutakura mitoro iri nani, uye inodzivirira ngura.Pukuta zvipfeko zvakawanda usinganetseki nematambudziko ekutakura mitoro, uye uve nehupenyu hurefu hwebasa.
Tichitarisa basa racho, pasi-yakamira zvipfeko rack inogonawo kuratidza mabasa akasiyana-siyana.Semuenzaniso, mapuranga akawanda epasi-amire anogona kushandiswa sechigadziko kunze kwekurembera zvipfeko.Iyi yakawanda-inoshanda pasi-yakamira rack inoshanda chaizvo.Inokurudzirwa kusarudza iyi.zvinoshanda.
Tarisa maitiro.Chimiro chehanger chinofanirwa kuenderana nemhando yese yeimba.Edza kuenderana muchimiro uye usatarise zvakanyanya kukurumidza.Zvakanakisisa kubatanidza mune imwe.
Kurongeka kwakananga kwemukati memba pasi hangers
Mapango ekuomesera pasi, mapuranga ekuomeswa pasi akagadzirwa nematanda, anoshandiswa zvakanyanya zuva nezuva, ari nyore uye akanaka, uye ane tsigiro iri nani yakaenzana, asi kudzivirira kwavo unyoro kunofanirwa kutariswa.
Plastic floor drying racks ine mari, asi mhando inosiyana.
Metal floor drying racks, floor drying racks yakagadzirwa nesimbi, ndeyemazuva ano uye inodhura.
Rattan floor drying racks inogadzirwa kubva kune rattan zvinhu.
Kuburikidza nesumo yedu chaiyo kune emukati pasi hanger mune ino chinyorwa, ini ndinotenda munhu wese ane nzwisiso iri nani yemukati memba pasi hangers.Muchokwadi, iyo yemukati pasi hanger ndiyo inonyanya kushandiswa dhizaini.Iyo yemukati yepasi hanger haigone kungoshandiswa mukati memba, asi kana mamiriro ekunze akanaka, unogona zvakare kutora iyi hanger yepasi kuti uomese zvipfeko zvako zvemba kunze.
Uyezve, machira emukati emukati anodhura zvakanyanya pane kusimudza racks.Paunenge uchitenga indoor floor hangers, unogona kuzvitenga maererano nemhando yaunofarira.
Nguva yekutumira: Zvita-15-2021